Hailey Baldwin ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီလား မေးလို့ ဒေါသထွက်သွားတဲ့ Justin Bieber
Hailey Baldwin ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီလားလို့ မေးခံရတဲ့အပေါ် ဒေါသထွက်သွားတဲ့ Justin Bieber
26 Jul 2018 . 9:24 AM
Justin Bieber နဲ့ Hailey Baldwin တို့ရဲ့ ချစ်ခရီးလမ်း လျှောက်လမ်းမှုဟာ အရမ်းကို မြန်ဆန်နေတဲ့အတွက် လူတွေက ဘာကြောင့် ဒီလောက်မြန်ရတာလဲဆိုတာကို အရမ်းစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ Justin Bieber ကို သတင်းမီဒီယာတစ်ခုက ကင်မရာသမားတစ်ယောက်က “Hailey မှာ အခု ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီလား၊ မင်းက မင်းတို့နှစ်ယောက်ဟာ မိသားစုတွေလိုပဲလို့ ပြောထားတဲ့အတွက် Hailey ကိုယ်ဝန်ရှိနေတာမလား” လို့ မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီမေးခွန်းကို Justin Bieber ကြားတဲ့အချိန်မှာ စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်သွားပုံရပြီး “ခင်ဗျားဘာဖြစ်ချင်နေတာလဲ” လို့ အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ မေးခွန်းကို အဲဒီဘဲကို လှည့်မေးလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့မှ “You just seem too like, you just seem too normal to be doing this job. I just don’t understand why you gotta try to getarise, you know what I’m saying?” ဆိုပြီး ပြန်မေးခဲ့ပါတယ်။
Justin Bieber နဲ့ Hailey Baldwin ဟာ ဇူလိုင်လ ၇ရက်နေ့ Bahamas ကို အပျော်ခရီးထွက်နေတဲ့အချိန်မှာ စေ့စပ်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Justin Bieber ဟာ Hailey ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီဆိုတဲ့ သတင်းကို မေးတဲ့အခါ စိတ်ဆိုးသွားပုံရပေမယ့် လုံးဝငြင်းဆန်ခြင်းလည်း မပြုတဲ့အတွက် ပရိသတ်တွေကတော့ ဆက်ပြီး စိတ်ဝင်စားနေခဲ့ကြပါတယ်။
Source : Harpersbazzar.com
Hailey Baldwin ကိုယျဝနျရှိနပွေီလားလို့ မေးခံရတဲ့အပျေါ ဒေါသထှကျသှားတဲ့ Justin Bieber
Justin Bieber နဲ့ Hailey Baldwin တို့ရဲ့ ခဈြခရီးလမျး လြှောကျလမျးမှုဟာ အရမျးကို မွနျဆနျနတေဲ့အတှကျ လူတှကေ ဘာကွောငျ့ ဒီလောကျမွနျရတာလဲဆိုတာကို အရမျးစိတျဝငျစားနကွေပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ပဲ Justin Bieber ကို သတငျးမီဒီယာတဈခုက ကငျမရာသမားတဈယောကျက “Hailey မှာ အခု ကိုယျဝနျရှိနပွေီလား၊ မငျးက မငျးတို့နှဈယောကျဟာ မိသားစုတှလေိုပဲလို့ ပွောထားတဲ့အတှကျ Hailey ကိုယျဝနျရှိနတောမလား” လို့ မေးမွနျးခဲ့ပါတယျ။
အဲဒီမေးခှနျးကို Justin Bieber ကွားတဲ့အခြိနျမှာ စိတျဆိုးဒေါသထှကျသှားပုံရပွီး “ခငျဗြားဘာဖွဈခငျြနတောလဲ” လို့ အဓိပ်ပာယျရတဲ့ မေးခှနျးကို အဲဒီဘဲကို လှညျ့မေးလိုကျပါတယျ။ ပွီးတော့မှ “You just seem too like, you just seem too normal to be doing this job. I just don’t understand why you gotta try to getarise, you know what I’m saying?” ဆိုပွီး ပွနျမေးခဲ့ပါတယျ။
Justin Bieber နဲ့ Hailey Baldwin ဟာ ဇူလိုငျလ ၇ရကျနေ့ Bahamas ကို အပြျောခရီးထှကျနတေဲ့အခြိနျမှာ စစေ့ပျခဲ့ကွတာ ဖွဈပါတယျ။ Justin Bieber ဟာ Hailey ကိုယျဝနျရှိနပွေီဆိုတဲ့ သတငျးကို မေးတဲ့အခါ စိတျဆိုးသှားပုံရပမေယျ့ လုံးဝငွငျးဆနျခွငျးလညျး မပွုတဲ့အတှကျ ပရိသတျတှကေတော့ ဆကျပွီး စိတျဝငျစားနခေဲ့ကွပါတယျ။